Scott McTominay oo shaaca ka qaaday liiska xiddigaha uu kaga daydo kubadda cagta – Gool FM
(Manchester) 28 Maajo 2020. Xiddiga qadka dhexe kooxda Manchester United ee Scott McTominay ayaa amaaney kartida weyn ee uu leeyahay saaxiibkiis reer France ee Paul Pogba.
Dhinaca kale xiddiga reer Scotland ee Scott McTominay ayaa tilmaamay liiska xiddigaha uu kaga dhiirado kubadda cagta, oo ay ku jiraan Zinedine Zidane iyo Patrick Vieira.
Wargyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi dhinacyo badan taabanaya ee uu bixiyay Scott McTominay, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaa jira qaabab badan oo wanaagsan ee kubadda cagta adduunka ah, Paul Pogba inta badan waa kuwa ugu wanaagsan, tusaalayaashaas, aad ayuu u xoog badan yahay, isla markaana dhaqso ayuu garoonka ugu ordaa”.
“Waa inaan gooyaa qadadka sida uu sameeyo Pogba, oo aan u dhaqaaqaa sanduuqba sanduuqa kale, isla markaana aan abuuro fursado, waa inaan xilli kasta heysanaa isku dheelitirkaas, isla markaasna haddii uu mid baxo midka kale uu joogaa, taas aad ayey muhiim ugu tahay qadka dhexe”.
“Inaad noqoto xiddig qadka dhexe ah isla markaana aad ka ciyaarto sanduuqba sanduuqa kale, waxaa jira tusaalooyin qaar ee aad u wanaagsan sida Zinedine Zidane, Patrick Vieira iyo Roy Keane aad ayey ugu fiicnaayeen taas”.
“Aniga ahaan, waxaa muhiim ii ah inaan sii wado daawashada fiidiyowga arrimahan inta aan awoodo, si aan u falanqeeyo”.